သတင်း - ဟိုက်ဒရောလစ်ပုလင်းပေါက်နှင့် ဝက်အူပေါက်ကြား ကွာခြားချက်
ပထမဦးစွာ၊ ဤ jack နှစ်မျိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးများသော jacks များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ application များသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။အတိုချုံးရှင်းပြကြပါစို့။
အကြောင်းပြောကြရအောင်ဝက်အူပုလင်းဂျိုက်ပထမဆုံး၊ လေးလံသောအရာကို မြှောက်ရန် သို့မဟုတ် နှိမ့်ချရန် ဝက်အူနှင့် အခွံမာသီး၏ နှိုင်းရရွေ့လျားမှုကို အသုံးပြုသည်။၎င်းတွင် main frame၊ base၊ screw rod၊ lifting sleeve၊ ratchet group နှင့် အခြားသော အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ လက်ကိုင်ကို ratchet wrench ဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ လှည့်ရန်သာ လိုအပ်ပြီး သေးငယ်သော bevel ဂီယာသည် ကြီးမားသော bevel ဂီယာကို လှည့်စေပြီး ဝက်အူကို လှည့်စေသည်။ရုတ်သိမ်းသည့်လက်စွပ်၏ထုတ်ကုန်ကို မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် နှိမ့်ချခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်။လက်ရှိတွင်၊ ဤ Jack အမျိုးအစားသည် lifting အမြင့် 130mm-400mm ရှိသည်။ဟိုက်ဒရောလစ် jack နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော lifting height ပါသော်လည်း ထိရောက်မှုမှာ 30%-40% တွင် နိမ့်ပါသည်။
နောက်တစ်ခုကဟိုက်ဒရောလစ်ပုလင်းဂျိုက်ဖိအားဆီ (သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ဆီ) မှတဆင့် ပါဝါပို့လွှတ်သော ပစ္စတင်သည် ရုတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အပြီးသတ်စေရန်။
လီဗာလက်ကိုင် 1 ကို လက်ဖြင့် မြှောက်လိုက်သောအခါ၊ ပစ္စတင်ငယ်သည် အထက်သို့ မောင်းနှင်သွားပြီး ပန့်ဘော်ဒီ2တွင် အလုံပိတ်လုပ်ဆောင်သည့် ပမာဏ တိုးလာသည်။ဤအချိန်တွင်၊ ဆီထွက်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်နှင့် ၎င်းတို့တည်ရှိရာဆီလမ်းကြောင်းများကို အသီးသီးပိတ်လိုက်သောကြောင့် ပန့်ကိုယ်ထည်2တွင် အလုပ်လုပ်သည့်ပမာဏသည် partial vacuum အဖြစ် တိုးလာသည်။လေထုဖိအား၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ ဆီတိုင်ကီရှိ ဆီသည် ဆီပိုက်မှတဆင့် ဆီစုပ်ယူစစ်ဆေးသည့်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ပြီး ဆီစုပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အပြီးသတ်ရန်အတွက် ပန့်ဘော်ဒီ2သို့ စီးဆင်းသည်။
2. ဆီစုပ်ခြင်းနှင့် လေးလံသော ရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
လီဗာလက်ကိုင်ကို ဖိလိုက်သောအခါ၊ ပစ္စတင်ငယ်သည် လွင့်ကျသွားသည်၊ ပန့်ကိုယ်ထည်2ရှိ ဆီခန်းငယ်၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုပမာဏ လျော့နည်းသွားကာ အတွင်းရှိဆီများ ညှစ်ထုတ်သွားကာ ဆီထွက်နှုန်းစစ်ဆေးသည့် valve ကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည် ( ဒီအချိန်မှာ ဆီစုပ်တဲ့တစ်လမ်းသွား Valve က ဆီပတ်လမ်းကို ဆီတိုင်ကီဆီကို အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ဟိုက်ဒရောလစ်cylinder (ဆီခန်း) ဆီပိုက်မှတဆင့်။ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ (ဆီခန်း) သည် အလုံပိတ်အလုပ်လုပ်သည့် ထုထည်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖိအားမှထုတ်ပေးသော တွန်းအားကြောင့် ဆီဝင်ရောက်ခြင်းသည် ပစ္စတင်ကြီးအား တွန်းထုတ်ပြီး အလေးချိန်ကို တွန်းထုတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။လီဗာလက်ကိုင်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ မြှောက်ခြင်းနှင့် ဖိခြင်းသည် လေးလံသောအရာကို အဆက်မပြတ်မြင့်တက်စေပြီး ရုတ်သိမ်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေသည်။
3. လေးလံသော အရာဝတ္ထု ပြုတ်ကျခြင်း ဖြစ်စဉ်
ကြီးမားသော ပစ္စတင်သည် အောက်ပြန်ဆင်းရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ဆီမြောင်း valve 8 (90° လှည့်) ကိုဖွင့်ပြီး လေးလံသော အရာဝတ္တု၏ အလေးချိန်အရ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ (ဆီခန်း) အတွင်းရှိ ဆီများသည် ဆီတိုင်ကီဆီသို့ ပြန်စီးဆင်းသွားသည်၊ ကြီးမားသော piston သည် နေရာသို့ ကျဆင်းသွားသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်လည်းကောင်းပုလင်းဂျိုက်ဟိုက်ဒရောလစ်ပို့လွှတ်ခြင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနိယာမမှာ- ဆီအားအလုပ်လုပ်ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြုကာ၊ ရွေ့လျားမှုကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုမှတစ်ဆင့် ပေးပို့နိုင်ပြီး ပါဝါအား ဆီ၏အတွင်းပိုင်းဖိအားမှတစ်ဆင့် ပေးပို့ပါသည်။ဟိုက်ဒရောလစ် ဂီယာသည် အဓိကအားဖြင့် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 01-2022